Cele News Archives - Page 10 of 278 - Cele Gabar
Home/Cele News (page 10)
2 weeks ago	Cele News
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ ဘေဘီမောင်ကတော့လတ်တလောမှာ သားဂန်းနဲ့အိမ်ထောင်ကျပြီး​ေနာက်ရင်သွေးလေးကိုလွယ်ထားရတာပါ။ဘဝကိုအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာ​ြဖတ်သန်းနေတဲ့အပြင်အလှူရေစက်လက်နဲ့မကွာပြုလုပ်လျက်ရှိတာပါ။ ဒါ့အပြင်မိဘအပေါ်လည်းအမြဲသိတတ်​စောင့်​ေရှာက်တဲ့ဘေဘီမောင်ကတော့မနေ့ကကျရောက်တဲ့အမေများနေ့မှာ”မေကြီးကိုသွားချင်တဲ့ခရီးတွေအစုံလိုက်ပို့ပေးချင်တယ် စားချင်တာတွေသူမကြိုက်တာတွေအမြဲကျွေးချင်တယ် အလှူတန်းတွေမေကြီးနဲ့တူတူလုပ်ချင်တယ် အတတ်နိုင်ဆုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားချင်တယ်မေကြီးကိုချစ်တဲ့သမီးကြီး🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️အမေများနေ့ဆိုတာကျမအတွက်နေ့စဉ်နေတိုင်းပါပဲ🙏🏻🙏🏻🙏🏻မေမေများအားလုံးကိုဦးခိုက်ရှိခိုးကန်တော့ပါတယ်🙏🏻🙏🏻🙏🏻”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ပုံလေးတွေတင်လာခဲ့တာပါ။ CeleGabarပရိသတ်တွေလည်း မိဘအပေါ်သိတတ်တဲ့ ဘေဘီမောင်ရဲ့စိတ်ထားလေးကိုသဘောကျရင်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။ Koe- CeleGabar Source- ThandarZaw ” မိခင္ႀကီးကို ျပဳလုပ္ေပးခ်င္တဲ့အရာေတြကို ထုတ္ေျပာကာ အေမမ်ားေန႔ကိုဂုဏ္ျပဳခဲ့တဲ့ ေဘဘီေမာင္” CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေရ ေဘဘီေမာင္ကေတာ့လတ္တေလာမွာ သားဂန္းနဲ႔အိမ္ေထာင္က်ၿပီး​ေနာက္ရင္ေသြးေလးကိုလြယ္ထားရတာပါ။ဘဝကိုေအးခ်မ္းေပ်ာ္႐ႊင္စြာ​ျဖတ္သန္းေနတဲ့အျပင္အလႉေရစက္လက္နဲ႔မကြာျပဳလုပ္လ်က္ရွိတာပါ။ ဒါ့အျပင္မိဘအေပၚလည္းအၿမဲသိတတ္​ေစာင့္​ေရွာက္တဲ့ေဘဘီေမာင္ကေတာ့မေန႔ကက်ေရာက္တဲ့အေမမ်ားေန႔မွာ”ေမႀကီးကိုသြားခ်င္တဲ့ခရီးေတြအစုံလိုက္ပို႔ေပးခ်င္တယ္ စားခ်င္တာေတြသူမႀကိဳက္တာေတြအၿမဲေကြၽးခ်င္တယ္ အလႉတန္းေတြေမႀကီးနဲ႔တူတူလုပ္ခ်င္တယ္ အတတ္ႏိုင္ဆုံးစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ထားခ်င္တယ္ေမႀကီးကိုခ်စ္တဲ့သမီးႀကီး🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️အေမမ်ားေန႔ဆိုတာက်မအတြက္ေန႔စဥ္ေနတိုင္းပါပဲ🙏🏻🙏🏻🙏🏻ေမေမမ်ားအားလုံးကိုဦးခိုက္ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါတယ္🙏🏻🙏🏻🙏🏻”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ ပုံေလးေတြတင္လာခဲ့တာပါ။ CeleGabarပရိသတ္ေတြလည္း မိဘအေပၚသိတတ္တဲ့ ေဘဘီေမာင္ရဲ႕စိတ္ထားေလးကိုသေဘာက်ရင္မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါဦးေနာ္။ Koe- CeleGabar Source- ThandarZaw
ပရိသတ်ကြီးရေ လင်းဇာနည်ဇော်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ပရိသတ်အချစ်တော် လင်းဇာနည်ဇော်က အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့အတူ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးကို လုပ်ကိုင်နေခဲ့ပါတယ်။ လင်းဇာနည်ဇော်ရဲ့ သမီးလေးဖြစ်တဲ့ မြူလင်းကိုကိုကတော့ လက်ရှိမှာ အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိသေးပေမဲ့ ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ ရုပ်ရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ပရိသတ်တွေချစ်ခင်မှုကို ရရှိနေခဲ့ပါသေးတယ်။ မြူလင်းကိုကိုကတော့ မနေ့က အမေများနေ့မှာ သူ့ရဲ့မေမေကို ကိတ်မုန့် ပန်းစည်းတွေနဲ့အတူ တရိုတသေကန့်တော့ခဲ့ပါသေးတယ်။ မေမေလင်းဇာနည်ဇော်အပြင် ဖွားဖွားရယ် ကြီးတော်ဖြစ်တဲ့ ချစ်ချစ်ဇော်တို့ကိုလည်း အတူတကွကန်တော့ခဲ့ပါသေးတယ်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ မြူလင်းကိုကိုရဲ့ ဖွားဖွား ကြီးတော်နဲ့ မိခင်အပေါ်မှာ သိတတ်လိမ္မာမှုကြောင့် ပရိသတ်တွေက ချီးကျူးပြီး အချစ်ပိုနေခဲ့ကြပါသေးတယ်။ Source – Myu Linn Ko …
ပရိသတ်ကြီးရေ မနေ့ကမေလ (၈)ရက်နေ့လေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် ဝါရင့် သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးကြီးဖြစ်တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်ကျရောက်တဲ့ နေ့ရက်လေးပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မနေ့က မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာတော့ ထက်ထက်မိုးဦးက အသက် (၅၁)နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထက်ထက်ကတော့ သူ့ရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာ အာဟာရသုခဆွမ်းစားကျောင်းဆောင် လှူဒါန်းခဲ့ဖူးတဲ့ အလိုတော်ပြည့်ဓမ္မာစရိယတက္ကသိုလ်မှာမွေးနေ့ကောင်းမှုအလှူလေးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထက်ထက်မိုးဦးကလည်း “အရင်က ထက်ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ကျောင်းမှာပဲ မနှစ်ကလို ဒီနှစ်မှာလဲလှူဖြစ်ခဲ့တယ်” ဆိုပြီး ရေးသားဖော်ပြထားခဲ့ပါသေးတယ်။ အလှူလေးရဲ့ အဖို့ဘာဂတွေကိုလည်း “မွေးနေ့အလှူလေးမှာ ၇ရက်သားသမီးအားလုံး ကုသိုလ်အတူရကြပါစေရှင်။” ဆိုပြီးတော့လည်း မျှဝေထားခဲ့ပါသေးတယ်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးတွေလည်း ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ မွေးနေ့အလှူလေးကို သာဓုခေါ်ဆိုပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ Source – Htete Htet Moe Oo Chilli – CeleGabar -Zawgyi …
CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေမေမြင့်မိုရ်ကတော့ ပန်းနုသွေး အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေစတင်အားပေးခံခဲ့ရကာအရိပ်ဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်း စုစုလှိုင်အဖြစ် ပါ၀င်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ပုဂံမြို့သူဇာတ်ကား မှာလည်း အစော ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်နဲ့ ပရိသတ်အားပေးမှု အပြည့်အ၀ရရှိထားသူလေးပါ။ Star Awards 2018 Rising Star ဆုကို လည်း ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ အမြဲအနေအေးပြီး တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့ မေမြင့်မိုရ်ကိုပရိသတ်တွေကချစ်စနိုးနဲ့မေလေးလို့လည်းခေါ်ကြတာပါ။လက်ရှိမှာသူမအနေနဲ့ ပင်လယ်ကမ်းခြေကိုရောက်ရှိနေတာပါ။ အမည်းရောင်ဝမ်းဆင်လေးနဲ့စွဲမက်ဖွယ်ကမ်းခြေရောက်ပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်း တင်လာခဲ့တာပါ။ အမြဲရိုးရိုးယဥ်ယဥ်လေးတွေဝတ်ဆင်တတ်တဲ့မေလေးကတော့ ခပ်​ေဟာ့ဟော့ပုံစံလေးနဲ့လည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ ပုံလေးတွေကို CeleGabarပရိသတ်တွေအတွက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါိတယ်နော်။ Koe- CeleGabar Source- MayMyintMo ” ခပ္မိုက္မိုက္အမည္းေရာင္ဝမ္းဆက္ေလးနဲ႔ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ ကမ္းေျခေရာက္ပုံရိပ္ေတြကို တင္လာခဲ့တဲ့ေမျမင့္မိုရ္” CeleGabarပရိသတ္ႀကီးေရေမျမင့္မိုရ္ကေတာ့ ပန္းႏုေသြး အေနနဲ႔ ပရိသတ္ေတြစတင္အားေပးခံခဲ့ရကာအရိပ္ဇာတ္လမ္းတြဲမွာလည္း စုစုလႈိင္အျဖစ္ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားၿပီး ပုဂံၿမိဳ႕သူဇာတ္ကား မွာလည္း အေစာ ဆိုတဲ့ …
ပရိသတ်ကြီးရေ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ ချစ်စရာကောင်း လှတဲ့ ကလေးတွေထဲက အာကြီးကိုတော့ ပရိသတ်တွေကတု် အထူတလည်မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင်ကို ရင်နှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်။ အာကြီးကတော့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ဂေဟာလေးကိုရောက်လာကတည်းက ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို ရရှိထားတဲ့ ကလေးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အာကြီးကတော့ ချစ်မွှေးပါတာကြောင့် ပရိသတ်တွေက ချစ်နေရတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သလို အရွယ်ရောက်လာတာနဲ့အမျှ ချစ်အောင်နေတတ်ပုံ မေမေခိုင်နှင်းဝေကို ချွဲလွန်းတဲ့ ချွဲစိန်လေးဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေက ပိုလို့တောင် အချစ်ပို နေခဲ့ရပါသေးတယ်။ မနေ့ကလည်း မေမေခိုင်နှင်းဝေကတော့ အာကြီးရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ထပ်မံမျှဝေဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ အာကြီးက မှန်ကို လက်က မချစတမ်းကိုကြည့်နေတဲ့ အသဲယားစရာကောင်းလှတဲ့ ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ အာကြီးကတော့ ချွဲစိန်လေးဖြစ်တဲ့အပြင် မှန်ကြိုက်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါပဲနော်။ အာကြီးရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို …
ပရိသတ်ကြီးရေ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် မော်ဒယ်လ်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ သင်ဇာက သူ့ရဲ့အနုပညာခြေလှမ်းသစ်လေးတစ်ခု ထပ်မံလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ မျှဝေခဲ့ပါသေးတယ်။ သင်ဇာရဲ့ အနုပညာခြေလှမ်းသစ်လေးကတော့ အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပထမဆုံး သီချင်းလေးသီဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာကတော့ သူ့ရဲ့ သီချင်းလေးထွက်ရှိလာဖို့ရှိကြောင်းကြေညာခဲ့စဉ်ကတည်းက ပရိသတ်တွေကတော့ စိတ်ဝင်တစားရှိနေခဲ့ကြပြီး အမြည်းတင်ပေးတဲ့ ဗီဒီယိုလေးမှာတင် တော်တော်လေးနဲ့တင်တောင် သင်ဇာရဲ့ သီချင်းလေးကပရိသတ်တွေကြားမှာ ပေါက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ မနေ့ကတော့ သင်ဇာက သူ့ရဲ့သီချင်း အစအဆုံးလေးကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ မျှဝေဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးတွေထဲက သင်ဇာရဲ့ သီချင်းအသစ်လေးကို စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် သင်ဇာရဲ့ သီချင်းအသစ်လေးကို ပြန်လည်မျှဝေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ﻿ Source – Thin Zar Wint …
ပရိသတ်ကြီးရေ ခင်ဝင့်ဝါကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဝင့်ဝါကတော့ ဒီနေ့မေလ (၇)ရက်နေ့လေးမှာ အင်မတန်မှမွန်မြတ်လှတဲ့ အလှူလေးတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ မျှဝေဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ “ဒီနေ့ဆို ဖွားဖွားကြီး ဆုံးတာ (၁၄)နှစ်တိတိပြည့်သွားပြီ။ ဘဘကြီးက ၃.၂.၂၀၁၂ မှာဆုံးတော့ အခုဆို (၁၀) နှစ်ကျော် သွားပြီပေါ့ ဘဘကြီး နဲ့ ဖွားဖွားကြီး အတွက် နေ့စဉ် နှစ်တိုင်းရည်စူးအလှူတွေလုပ်ပေးခဲ့ပေမယ့် ကြီးကြီးမားမားတော့ မလှူပေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဒီနှစ်တော့ ဘဘကြီး နဲ့ဖွားဖွား ကြီးတို့ကို ရည်စူးပြီး ဝင့်ဝါသင်္ကြန်တုန်းကတရားစခန်းဝင်ခဲ့တဲ့ လိမ္မော်ခြံကျေးရွာ၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ သီလရှင်ဝိပဿနာ ကျောင်းမှာ တကယ့်ကို လိုအပ်နေတဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ဆွမ်းစားဆောင် ဆောက်လုပ်ရန် …
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ဇွဲနိုင်ဝင်းကတော့ အရှင်ဇောတိက ဆိုတဲ့ ဘွဲ့နဲ့ သာသနာဘောင့်ကို ဝင်ရောက်နေခဲ့တာ အခုလို (၈၅)ရက်တောင်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ ဒီနေ့မှာတော့ အရီငဇောတိက တဖြစ်လဲ သရုပ်ဆောင် ဇွဲနိုင်ဝင်းက အရုဏ်ဆွမ်းကပ်လှူတဲ့ အလှူလေးတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ။ အလှူလေးကတော့ ကိုသားကြီး (သရုပ်ဆောင် ဒွေး)ရဲ့ ကိုယ်စားပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ အလှူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ မေလ (၇)ရက်နေ့လေးကတော့ သရုပ်ဆောင်ဒွေးရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်ကျရောက်တဲ့ နေ့ရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုသားကြီးသာ သက်ရှိထင်ရှားရှိမယ်ဆို ဒီနေ့မွေးနေ့လေးမှာတော့ အသက် (၅၆)နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရှင်ဇောတိကတဖြစ်လဲ သရုပ်ဆောင်ဇွဲနိုင်ဝင်းကတော့ ဒီနေ့ ဒွေးနေ့မွေးနေ့လေးမှာ ဒွေးကိုယ်စားဆွမ်းကပ်အလှူလေးပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ ဇွဲနိုင်ဝင်းကတော့ ဒီနေ့သူပြုလုပ်ပေးတဲ့ ကိုသားကြီးရဲ့ မွေးနေ့အလှူလေးကို ကိုသားကြီးတစ်ယောက် ကောင်းမှုတွေရရှိပါစေလို့လည်း မျှဝေထားခဲ့ပါတယ်။ …
ပရိသတ်ကြီးရေ မေတိုးခိုင်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် မင်းသမီးချော အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့ တူမလေးဖြစ်ပြီး သူကိုယ်တိုင်လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်တစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့သူပါ။ မေတိုးခိုင်ကတော့ ကိုယ်တိုင်လည်း ရွှေကြိုတစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်ောဆင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာတော့ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိနေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ မေလ (၇)ရက်နေ့လေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် ဖြစ်တဲ့ မေတိုးခိုင်ရဲက မွေးနေ့ရက်မြန်ကျရောက်တဲ့ နေ့ရက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ မေတိုးခိုင်ကလည်း ဒီနေ့သူ့ရဲ့မွေးနေရက်လေးကတော့ “ဘဝမှာဘယ်တော့မှမမေ့တော့မယ့် မွေးနေ့တစ်ခုကိုလည်းဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးပြီ.. It isaprivilege and I am grateful to be able to celebrate with my loved ones beside me now. A year …
ပရိသတ်ကြီးရေ ဟန်နေတာကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ပရိသတ်အချစ်တော် အဆိုတော်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် ဟန်နေတာကတော့ မနေ့က မေလ (၆)ရက်နေ့က သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ မွေးနေ့အလှူအနေနဲ့ ကြာဇံကြော်အလူလေးပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။ ဟန်နေတာကတော့ သူနဲ့ ကိုဝေကြီးရဲ့ မွေးနေ့အလှူအနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်ဈေးဝယ်ကိုယ်တိုင်ကြာဇံကြော်ပြီး သန့်ရှင်းရေး စည်ပင်လုပ်သားတွေနဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်မှာတွေ့တဲ့ ချို့တဲ့တဲ့ သူတွေထံ ကိုယ်တိုင်လိုက်လံလှူဒါန်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလှူလေးပြုလုပ်ခဲ့တာကိုလည်း ဗီဒီယိုလေးရိုက်ကူးပြီး သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ မျှဝေထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟန်နေတာတို့ရဲ့ မွေးနေ့အလှူလေးကတော့ တကယ်ကို ရိုးရှင်းပေမဲ့ မွန်မြတ်လှတဲ့ အဟာရဒါနအလှူလေးပါပဲနော်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးတွေလည်း ဟန်နေတာတို့ရဲ့ မွန်မြတ်လှတဲ့ မွေးနေ့အလှူလေးကို ထပ်တူကုသိုလ်ရရှိစေဖို့ သာဓုခေါ်ဆိုပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ ﻿ Source – Han Nay Tar …